Expanded koollo PTFE daahir ah Tape Thread - Shiinaha Yangzhong nasiib Star Daboolayo
Expanded daahir ah Thread PTFE koollo Tape
Desiccant Rotor rido sida khaaska ah
Electromagnetic diaphragm Qadarka Qaadashada Bamka Khatimidii
PTFE baqshadda CNAF Lapjoint Flange goomahooda
Bushing saarista gabogabaysmo Lock
Camshaft End Kooban
OEM graphite Buuxinaya Ring PTFE
No-dalool PTFE baqshadda CNAF goomahooda
Description: 1.Expanded PTFE cajalad talbiista waa cajalad goomahooda multi-ujeeddo ka 100% wax fluorocarbon PTFE balaariyay macmalay. 2.It bixisey sida cajalad joogto ah u hooseeya cufnaanta la strip taageero is-xabag ah. 3.It jilicsan yahay iyo spongy, waxaa saamaxdo in ay si fudud u socon ta oo dhan wax isdaba marin dusha iyo ku cadaadisaa in xirmado dhuuban cadaadis. Codsiga: Expanded PTFE cajalad talbiista waxaa lagu talinayaa in sida cajalad goomahooda ee steel ah, galaas damacsan, PVC iyo biibiile Maro adag flanges, buurka ...
1.Expanded PTFE cajalad talbiista waa cajalad goomahooda multi-ujeeddo ka 100% wax fluorocarbon PTFE balaariyay macmalay.
2.It bixisey sida cajalad joogto ah u hooseeya cufnaanta la strip taageero is-xabag ah.
3.It jilicsan yahay iyo spongy, waxaa saamaxdo in ay si fudud u socon ta oo dhan wax isdaba marin dusha iyo ku cadaadisaa in xirmado dhuuban cadaadis.
PTFE Expanded cajalad talbiista waxaa lagu talinayaa in sida cajalad goomahooda ee steel ah, galaas damacsan, PVC iyo biibiile Maro adag flanges, qaac marinnada, dabool la taaban karo, exchangers kulaylka, weelasha caagga ah fiber galaas xoojiyeen, flanges guryaha bamka, flanges weel uumi, manhole iyo manhole dabooshaa, goysyada dhoobada, marinnada hawo, nidaamyada Haydarooliga iyo pneumatic, nidaamyada biyaha iyo xaaladaha marawaxadaha.
Expanded PTFE cajalad si wadajir ah waxaa lagu soo saaray ka 100% PTFE, waa wax an inert oo loo isticmaali karaa in codsiyada badan oo ka dhan ah deegaan xoqe, marka laga reebo birta alkali la shubay oo fluorine aasaaska. 24B ma sadhayn doono warbaahinta iyo waxaa loo isticmaali karaa in codsiyada raashinka iyo qalabka daroogada.
Nooca Product: PTFE Expanded
Nooca Supply: Wadajirka daweyn Tape
Waxyaabaha: 100% PTFE, jilicsan iyo barti aad u fiican
Dhumucdiisuna: 1mm ~ 7.0mm
Width: 3mm ~ 25
kala duwan ph: 0-14
Yaree Cadaadis: 20Mpa (ama 2900 psi, ama 200kgf / cm2)
Mugga:. ~ 0.7 0.8g / cm3 (.. 43 ~ 49.5lbs / ft.3 cu)
Matrix Xoog siligga: 30Mpa (4260 psi)
Nasashada gurguurta (F38 ASTM): 51%
Previous: Desiccant Rotor rido sida khaaska ah
Thread koolo Khatimidii Ptfe Tape
Midabo Ptfe Daboolayo Tape
Ptfe tuuboyinka Daboolayo Tape
Ptfe Daboolayo Tape
Ptfe dhimatay Maro adag Tape
Ptfe Tape Khatimidii Thread
Khatimidii Ptfe Tape
Thread silikoon Khatimidii Ptfe Tape
Dhimatay Ptfe Tape
Tape dhimatay Khatimidii Thread Ptfe
Dunta Tape Daboolayo Ptfe
Aadka warshadaha nylon Bolt iyo Nut
Dahaaray Rubber PTFE diaphragm
Glass Fiber PTFE Buuxinaya
UHMWPE Fender Panel Anti-dhaceen Plate